Xarfaha farta ah: noocyada aan ku talineyno naqshadahaaga | Abuurista khadka tooska ah
Markaad shaqo haysato, daabac buug, soo bandhig mashruuc, xulashada font sax ah ayaa aad uga muhiimsan sidaad moodeysid. Waxay kuxirantahay ujeedada aad rabto inaad ku gaarto hawshaas, waxaad dooran kartaa xaraf ka duwan, qaab ka duwan. Xaqiiqdii, xulasho xumi waxay ka hor istaageysaa dadka inay ku xirmaan fariinta la isugu gudbinayo. Iyo, marar badan, waxaan iska indhatirnaa adeegsiga xarfaha kaladuwan ay yeelan karaan, sida isaaq iyo noocyadeeda.
Si lagaaga caawiyo inaad fahanto waa maxay farriintu oo waxaan ku siinayaa ikhtiyaarro noocyada nooca ah, ka hor intaadan in yar ka sii ogaan. Taasina waa waxa aan qaban doonno xiga.
1 Waa maxay farriintu
1.1 Italics: farta iyo astaamaha
2 Maxaa farta ah loo isticmaali karaa?
3 Italics: farta aad isticmaali karto
3.1 Qoraalka Qoob-ka-ciyaarka
3.7 Qarnigii 18aad
3.8 Kafee qurux badan
Waa maxay farriintu
Waraaqda inkaaran ayaa sidoo kale loo yaqaan far qoraal ah Waa hab qoraal oo la mid ah sida runta ah ee aad wax u qortid, adoo u janjeeraya waraaqo, leh ama aan lahayn isku xirnaanta xarfaha ... Si kastaba ha noqotee, noocyada u janjeera dhanka midig (xuruufta xarafka ama "farta").
Qaab-qoraalka noocan ahi wuxuu jiray boqollaal sano. Xaqiiqdii, waa warqada gacanta lagu qoray midkii loo bilaabay in lagu qoro gabayada, buugaagta, iwm. maadaama waqtiyadii hore ay ahaayeen dad "soo guuriyey" qoraallo si ay ula samaystaan ​​buugaag, dhammaantoodna waxaa lagu qoray warqaddan.
Si kastaba ha noqotee, midka ugu dhow ee u eg midka aan hadda isticmaalno wuxuu ka yimid qarnigii XNUMXaad, halkaas oo aan ku arki karno tusaalooyin ka mid ah waraaqaha, oo gacanta lagu qoray qalin iyo khad.
Wax yar ka dib, aristocracy-kii Ingriiska wuxuu go'aansaday inuu ku xardho qoraalkan farta saxarada naxaasta ah si loogu isticmaalo daabacaadda, kobcintiina waxay bilaabeen inay qurxiyaan qoraallo badan. Xaqiiqdii, heerkeedii ugu sarreeyay wuxuu ahaa 70-maadkii, lagumana diidin inuu ku soo laaban doono moodada muddo gaaban.
Italics: farta iyo astaamaha
Maanta, farta iyo farteeda waxaa lagu gartaa leeyihiin cilladaha, kuwaas oo iyagu iyaga ka dhiga mid iyaga u gaar ah, qaab sida haddii aad wax ku qoreyso qalin ama burush, oo la raro, si ka yar ama ka yar, oo leh barwaaqo.
Qaar badan oo ka mid ahi way fududahay in la akhriyo, in kasta oo ay jiraan kuwo kale oo, u janjeedha iyo habka wax loo qoro, aan la aqbali karin, gaar ahaan haddii aan la isticmaalin cabbirka far waaweyn.
Maxaa farta ah loo isticmaali karaa?
Wax kasta oo aad awoodid ku isticmaal farta qoraalka noocyada kala duwanLabadaba bilaash iyo lacagba, runta ayaa ah in qoraal noocan ah loo adeegsado ujeedooyin aad u qeexan. Tusaale ahaan:
Si aad u dhigto ereyo qalaad: waa wax iska caadi ah in, marka aad qoreyso weedh ay ku qoran tahay eray ku qoran af kale (Faransiis, Ingiriis, Talyaani ...) qoraal Isbaanish ah, ereygaas waxaa lagu qorayaa farta.
Si loo meeleeyo naanaysyo, ama ereyo magac been abuur ah, oo aan ahayn magacyo dhab ah.
Marka laga hadlayo cinwaannada, hadday yihiin filimo, buugaag, iwm.
Magacyada noocyada, taasi waa, magaca cilmiyaysan ee xayawaanka ama dhirta.
Magacyada saxda ah ee gaadiidka (Orient Express, Renfe, Alsa ...).
Hadaad ula jeedo magacyada ifafaalaha saadaasha hawada (Filomena, Katrina ...).
Si aad u muujiso wax lala yaabo.
In kasta oo tani ay tahay midda caadiga ah ee loogu talagalay faruuraha iyo adeegsiga farteeda, runtu waxay tahay inay jiraan xaalado "gaar ah" oo aad adiguna ku isticmaali karto. Tusaale ahaan, waxay u noqon kartaa xaaladaha rasmiga ah, sida qorista casuumaadda arooska, warqad jacayl ah, ama sameynta madax iyo cinwaanno soo jiita dareenka, ha ahaato joornaal, shaqo, buug ...
Bogagga shabakadda, ama waxyaabaha la xiriira naqshadeynta, waxaa kale oo laga yaabaa in la tixgeliyo. Dhibaatadu waa taas Qaab-qoraalka noocaan ahi ma fududa in la fahmo jaleecada hore Iyo, inkasta oo ay muuqaal ahaan qurux badan tahay, haddana waxay ku adkayn kartaa farriinta inay dhex marto, sidaa darteed sababta ay dad badani doorbidaan inay uga tagaan noocyadan noocyada ah "qurxinta".
Italics: farta aad isticmaali karto
Hoos waxaan ka sameynay a isku soo aruurinta qaar ka mid ah xarfaha farta ah ee loo adeegsan karo haddii aad u baahatid. Dabcan, xusuusnow inaadan ku xadgudbin tan iyo, haddii naqshadda aad dejineyso ay tahay mid xad dhaaf ah, font lafteeda ayaa laga yaabaa inay aad ugu badan tahay set-ka ugu dambeeya.
Kuwani waa talooyinkeena:
La xarimiyay, waa mid ka mid ah noocyada ugu quruxda badan ee aad isticmaali karto. Waxay leedahay faa'iidada ah, in kastoo xarfaha ku lifaaqan yihiin, oo ay xoogaa barwaaqoobeen, way fududahay in la akhriyo oo si fiican loo fahmo, markaa waad ku ridi kartaa baloogyada, daabacaadaha, iwm.
Dabcan, ma ahan wax rasmi ah oo aan nidhaahno, laakiin waxay ku dhex jirtaa xarfaha farta aan rasmiga ahayn. Hase yeeshe, way ku qurux badnaan kartaa mashaariicdaada, gaar ahaan haddii aad rabto inaad istaagto sababtoo ah sida geesinimada leh ay u soo baxdo.
Allura waa mid kale oo ka mid ah xarfaha farta ah ee aad isticmaali karto. Way ka cadahay, sidii aad adigu gacanta wax ku qori jirtay, oo lagu daray inay sii kordhayso. Weli, weli waa mid si caddaalad ah loo akhriyi karo. Waxa kaliya ee, mararka qaarkood, waa inaad siisaa a cabbir ka weyn sidii caadiga ahayd si fiican loo fahmay.
Calaamadaha, casumaadaha, iwm. waxay noqon kartaa kaamil ah.
Waxaan ku bilaabaynaa faransiis calaamadeysan oo dhib yar ka adag in la akhriyo, marka hore maxaa yeelay xarfaha oo dhami aad ayey isugu dhow yihiin, tan labaadna waxay uga xigtaa dhinaca midig. Si wada jir ah ula naqshadeynta warqadda, waxay umuuqan doontaa sida haddii eray kastaaba qayb ka ahaa israsaaseyn casri ah.
Way ku quruxsan tahay jumladaha gaagaaban maadaama haddii aad dhigto qoraal aad u weyn ay adkaan karto in dhammaadka lala gaaro.
Haddii aad raadineyso nooca fotal farta noocaas ah waxay leeyihiin xarfo waaweyn oo ay ka buuxaan curlsyo iyo nashqado isku dhafan, tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Waana taas, halka kiiska hoose uu xarrago leeyahay oo si fudud loo akhriyi karo, haddana waa kiiska sare ee soo jiidan doona dadka isticmaala markay arkaan.
Waxaan si gaar ah ugula talineynaa cinwaannada (tusaale ahaan buugaagta, cutubyada ...).
Ma xasuusataa inay jiraan dad markay wax qorayaan aan si fiican u fahmin waxa ay dhigeen? Waa hagaag Popsies-ka waad ku dayan kartaa saameyntaas, xaqiiqda soo jiidashada dareenka maxaa yeelay dhab ahaantii ma ogid haddii ay dhigeyso hal shay ama mid kale.
Es ku habboon in lagu jebiyo qoraalka caadiga ah, si loo soo jiito dareenka xiisaha ogaanshaha waxa uu xirnaa.
Waraaqaha calaamadaha ah, waa mid ka mid ah noocyada farqiga kuu ah ee kuugu deeqi doona sida ugu badan ee u soo baxa iyo waraaqaha loo yaqaan 'calligraphic' Waana taas gudaha xarfaha qaarkood ayaa kaa buuxin doona wareegyo, curlsyo iyo faahfaahin kale taas ayaa ka dhigaysa, lafteeda qurxinta dhammaystiran ee saxeex ama cinwaan kasta (iyada oo aan wax kale lagu darin).
Kuma talineyno font in si xad dhaaf ah loo isticmaalo, maxaa yeelay way adag tahay in la akhriyo, laakiin haddii aad dhigatid cabbir ku habboon oo aad u adeegsato hal erey (aan ka badnayn 3) way soo jiidan kartaa.
Dabcan, maskaxda ku hay taas habka ay tahay inaad uqaadato waa inaad dhigto qoraal laakiin aadan dareen ka qabin inaan la aqrin, maxaa yeelay waa naqshadda lafteeda waa inay soo qabataa akhristaha.
Kafee qurux badan
Foomkani waa mid ka mid ah kuwa ugu nadiifsan uguna casrisan. Waana taas, in kasta oo ay tahay faalig, Wuxuu ka tagayaa oo keliya waxyaabaha ka soo baxa dhamaadka, ka dhigaysa mid u eg inay isku meeraysanayso mowjado iyo qalooca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Xarafyada farta ah: noocyada aan ku talinno
Waa maxay Adobe Camera RAW Super Resolution: U Beddelo Sawirada FullHD illaa 4K